Maxay yihiin caqabadaha ka dhalan kara duulimaadyada habeenkii ee garoonka Muqdisho? - Caasimada Online
Home Warar Maxay yihiin caqabadaha ka dhalan kara duulimaadyada habeenkii ee garoonka Muqdisho?
Muqdisho (Caasimadda Online) – Markii ugu horeysay muddo ka badan 25 sano, waxaa garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle Cusmaan ka degtay diyaarad rakaab sidda xili habeen ah, waxayna diyaaradaas ka timid dalka Sucuudiga oo ay ka keentay dad soo gutay waajibaadkii xajka.
Garoonka waxa uu inta badan shaqeeyaa maalintiiKa sokoow AMISOM, garoonka waxaa la sheegaa in ay degganyihiin ciidamo kale oo shisheeye oo Soomaaliya caawiya, waxayna inta badan garoonka isticmaalaan habeenkii, iyada oo dadka reer Muqdisho ay soo sheegaan in habeen kasta ay arkaan diyaarado militari oo ka duulaya ama ka daganaya eelaboorka.
Rayid iyo Ciidan
Qarax ismiidaamin ah oo lala beegsaday garoonka Aadan Cadde illaa 12 qof ayaa ku dhimatay sida la sheegay
Garoonka Muqdisho oo 27 sano ka dib ay xilli habeen ah diyaarad ka soo degtay
Garoonka iyo Habeen
Xilliga habeenkii ma jirto wax shaqo ah oo ka socota garoonka